Fedora 27: inowanikwa uye ine nhau kwauri | Linux Vakapindwa muropa
Fedora ndeimwe yeklasiki, inozivikanwa kugoverwa kweGNU / Linux yakabuda muzuva rayo kubva kuRed Hat nenzira yakafanana neyakavhurikaSUSE kubva kuSUSE. Kana iwe uchizivana nenyika yeLinux, hazvigoneke kuti iwe hauzive kugovera uku, uye ini ndinogona kutaura zvishoma nezvazvo. Chete izvo zvino vagadziri vatikomborera neshanduro nyowani, Fedora 27. Inowanikwa kuitira kuti tigone kunakidzwa nayo kubva ikozvino zvichienda uye iwe unogona kuitora kubva webhusaiti yepamutemo yeprojekti...
Takataura zvakawanda nezveFedora, uye ikozvino naFedora 27 isu tine zvese zvayakanakira nazvo nhau zhinji iyo vatadzi vatipa. Iwe unotoziva kuti kubva pawebhu peji randakakusiira iwe mune yekutanga chinongedzo iwe unogona kurodha pasi ese ari maviri Workstation vhezheni yemabasa (ndiko kuti, emalaptop nematafura akafanana neayo isu tinowanzove nawo), iyo server server yemaseva uye Atomic vhezheni yakagadzirirwa LDK (Linux-Docker-Kurbernetes).
Fedora 27 yatora nguva yakareba kupfuura yaitarisirwa, chimwe chinhu icho vashanduri veFedora vatakashandisa nekunonoka kwavo kwese. Asi iyo inozivikanwa, inoshanduka, uye yakasimba dzimwe nzira iri pano, uye inoita saizvozvo nekushamisika kushoma ruoko rwayo. Imwe yacho kusanganisa kwe Mozilla Firefox Quantum iyo yatatotaura nezvayo pano muLxA, ndiko kuti, iyo yakavandudzwa uye yechimurenga vhezheni yeFirefox 57. Asi zvakare inosanganisira iyo GNOME 3.6 vhezheni yekumisikidza yayo default desktop nharaunda, kunyangwe painewo mifananidzo ine KDE Plasma, LXDE kana LXQt.
Ehezve mamwe mapakeji akagadziridzwa zvakare, pakati payo iri LibreOffice iyo inouya mushanduro 5.4, imwe ichangoburwa. Iwe unotoziva kuti ini munguva pfupi yapfuura ndakakuudza nezve LibreOffice 5.4.3, iyo yazvino yekuvandudza iyo yabuda panguva ino. Uye iro rekuvandudza basa harigumi pano, mamwe mapakeji aunowana akafanogadzirirwa akagadziridzwawo kune mamwe matsva mavhezheni, mamwe mabhugi abviswa uye iyo Linux kernel yakagadziridzwa. Chii chauri kumirira kuti uzviedze!?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Fedora 27: inowanikwa uye ine nhau kwauri
Mădălin Ignișca akadaro
Iyo Gnome 3.26.
Pindura Mădălin Ignișca
Uye chii iwe chaunofanirwa kuita kana iwe uchitove uine fedora 26 yakaiswa, kugadzirisa kune fedora 27 pasina kudzoreredza kubva pakutanga?